> Resource > Lugood > Lugood Alarm Clock - ha Lugood Waxaad toosaysaa
Saacad Alarm waa hab waxtar leh in aad u sheegto si ay u bilaabaan ama joojiyo samaynta walax. Haddii aad alarm music waa wanaagsan yahay ama u cabsi badan dhagaysan, aad midkooda Kobid Badan. Oo haatan bilaabaan inay soo qaado aad alarm saacad Lugood hore. Labada xor u yahay inuu kala soo bixi oo isticmaal.
Lugood Album u Mac
Tani waa saacada ugu awooda badan alarm si jeedi Lugood iyo Mac ay si buuxda u saftay saacada. Waxa ay taageertaa alaarmiga aan xad lahayn, playlist kasta oo Lugood (xitaa folder, raadiyaha, iyo share playlist), music random, iyo in ka badan. Baro wax badan oo ku saabsan Lugood Album u Mac
Lugood Alarm u Mac sidoo kale waa saacad hurdo. Plus, inta aad dhintay si aad music, Lugood Album u Mac dhigeysa your computer si dagan u seexdaan, tamar kaydsiga. Ka sokow feature saacada ah, xitaa waxa aad isticmaali karto si aad u bedelan ka mid playlist in kale, la beddelo niyadda aad xisbiga ee ah wakhti gaar ah (u sheegay martidaada in waxa la joogaa wakhtigii si ay u tago.)
iSnooze - Lugood Album Saacad for Windows
iSnooze waa Lugood alarm saacad playlist ku salaysan . Sida image soo socda lagu muujiyey, ku timaadda fursado badan si ay kuu ogolaanaysaa inaad jadwal jeer Lugood si ay u bilaabaan ciyaaro gabayo playlist soo xulay. Isla mar ahaantaa, mugga tartiib kordhaya, jadwalka qaylo badan, pausing ku meel gaar ah, lana yareeyo si nidaam saxan ballaaran ayaa sidoo kale la heli karaa. Dhammaan waxaa Lugood saacad ah alarm awood isticmaala Windows ka dhigaysa.
Download iSnooze halkan.
Sida loo kaabta iMessage in badan ku Computer aan Lugood